जापान मा! सबै भन्दा राम्रो मौसम। हिमालहरू पनि सुन्दर छन्! - Best of Japan
माउन्ट फुजी र शिबा सकुरा (काई फ्लोक्स, काई गुलाबी, हिमाली फ्लोक्स)। जापान प्रतिनिधित्व एक शानदार वसन्त परिदृश्य = शटरस्टक
ताजा हरियो दृश्य जापानी द्वीपसमूह मा मे जताततै सुन्दर छ। मैले अप्रिल पृष्ठमा भनेझैं, काई स्लिम र नेमोफिलाका फूलहरू राम्ररी फूल्न थाल्छन्। यदि तपाईं शिराकावागो जस्ता हिमाली क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने, ताजा हरियो र हिउँको हिउँको भिन्नता हिमालहरूको रमाईलो हुनेछ। यस पृष्ठमा, म विशेष रूपमा मे महिनाको लागि सिफारिश स्थल भ्रमण स्पटहरू परिचय दिनेछु।
टोक्यो, ओसाका, होक्काइडो मा जानकारी
हिउँ पग्लने उच्च भूभागहरू जस्तै कामिकोची धेरै सुन्दर छन्
यदि तपाईं मेमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरबाट छवि क्लिक गर्नुहोस् अधिक जानकारीका लागि।
अप्रिल देखि मई सम्म, तपाईं जापान मा धेरै आराम संग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। तापमान धेरै तातो वा चिसो छैन तर यो सहि छ। अपेक्षाकृत राम्रो मौसम देशव्यापी आनन्द लिन सकिन्छ। टोकियो, ओसाका, क्योटो, नारा, र हीरोशिमा जस्ता पर्यटन स्थलहरु यात्रुहरु को भीड को लागी यात्रा गरीरहेछ। सबै तरिकाले, कृपया जापानका विभिन्न स्थानहरूमा भ्रमण गर्नुहोस्।
यदि तपाईं पर्याप्त समयको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, म होशुको पहाडी क्षेत्र टोकियो र क्योटो आदिमा जान सिफारिस गर्दछु।
हरेक वर्ष मेमा जापानको हिमालबाट हिउँ पग्लन्छ र पहाडबाट पानी बग्दछ। यी स्ट्रिमको आवाज धेरै शुद्ध छन्। हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि रूखहरू एकैचोटि जीवित हुन्छन् जब जाडो समाप्त हुन्छ। यस समयमा हिमाली क्षेत्रहरू अति सुन्दर छन्, त्यसैले यसलाई तपाईंको यात्रामा थप्न विचार गर्नुहोस्।
मैले सिफारिस गर्न चाहेको ठाँउहरू निम्न हुन्:
कामिकोची (नागानो प्रान्त)
कामिकाची, जापान = शटरस्टकमा हटका हिमाल र कप्पा पुल
Kamikochi केन्द्रीय होन्शुको नागानो प्रान्तमा अवस्थित छ। यो एक प्लेटौं हो जुन जापानको केहि राम्रा पहाडहरूले घेरिएको थियो। हिमाल पहाडमा रहेको मेको सुन्दर दृश्य हो। यदि तपाईं टोकियोबाट रेल र बसहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो लगभग छ घण्टाको कम्युट हुनेछ। जहाँ धेरै राम्रा होटलहरू छन्, कमिकोची एम्पायर होटेल सहित, जुन लक्जरी रिसोर्ट होटेलको रूपमा धेरै लोकप्रिय छ, तपाईं रात आरामसँग बित्न सक्नुहुनेछ। कामिकोचीको आधिकारिक वेबसाइट निम्नानुसार छ।
जापान आल्प्स कामिकोची आधिकारिक वेबसाइट | Chubu Sangaku राष्ट्रीय पार्क
ओज (गुम्मा प्रान्त)
ओज सुन्दर पहाडहरूले घेरिएको छ, र फुटपाथहरू विशाल ओटा क्षेत्रहरू = एडोबस्टकमा राखिन्छ
यदि तपाईंलाई विशेष रूपमा पैदल यात्रामा रुचि छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु तपाईं ओजमा जानुहोस्। ओज लगभग १ high०० मिटरको उचाईको साथ उच्च भूमि हो। यो उच्च भूमि २००० मिटर पहाडहरूले घेरिएको छ। जाडोको भारी हिउँको बखत मानिसहरू भेट्न सक्दैनन्।
प्रत्येक वर्ष मेमा, हिमाल पहाडहरूमा पग्लिन थाल्छ र सुन्दर फूलहरू, "मिजु-बाशो" विशाल ओटा मैदानमा खिलछन्। ओजमा कुनै होटल छैन त्यसैले मान्छेहरूले पहाडको झोपडाहरू प्रयोग गर्छन्। हिमाली झोपडाहरू तुलनात्मक रूपमा ठूला र आरामदायक छन्। पर्यटकहरू ओजमा ड्राइभ गर्न सक्दैनन् त्यसैले मानिसहरू बसमा हातोमाची-तोज भन्ने प्रवेशद्वारमा जान्छन् र त्यहाँबाट हिड्दछन्। ओजेको आधिकारिक वेबसाइट निम्नानुसार छ।
अंग्रेजी - 尾 瀬 保護 財 団
मौसम सामान्यतया मेमा राम्रो छ तर महिना समाप्त भएपछि वर्षा बिस्तारै बढ्नेछ। प्रत्येक वर्ष जुनमा जापानमा बर्खा मौसम हुनेछ। तसर्थ, यदि तपाइँ मेको बखत जापान मा यात्रा गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईले मे भन्दा ढिलो भन्दा पहिले धेरै भन्दा धेरै यात्रा गर्नु पर्छ।
"जापानी वसन्त कसरी उपभोग गर्ने" फिर्ता